Inona ny Ethereum 2.0 ary nahoana no tena zava-dehibe izany - Cazoo
Inona ny Ethereum 2.0 ary nahoana no tena zava-dehibe izany
Home » Home » Inona ny Ethereum 2.0 ary nahoana no tena zava-dehibe izany
tenifototra: ethereum, ethereum 2.0, Masinina virtoaly Ethereum (EVM), Ethereum WebAss Assembly (EWASM), Porofon'ny tsatòka, scalability, Vitalik Buterin
Rehefa amin'ny 2015 Niditra tamin'ny harato lehibe i Ethereum, nanaitra ny fahalianana sy ny fientanam-po amin'ny ampahany lehibe amin'ny tontolon'ny mpamorona, ary mazava ho azy fa ny mpampiasa vola ihany koa. Ny fanantenan'izy ireo dia tsy maintsy nihanalefaka ihany satria nanomboka nipoitra tao amin'ny protokolola ny olana momba ny scalability sy ny fiarovana. Nisy ny fanatsarana ny kaody, ary tsy nijanona mihitsy ny fampandrosoana, saingy vetivety dia nanjary mazava tamin'ny rehetra fa mila fanarenana tanteraka i Ethereum mba hifaninana amin'ny ho avy. hamitana azy amin'ny ho avy: noho izany dia teraka ny Ethereum 2.0, miaraka amin'ny anarana hoe "code" Serenity.
Salama daholo izay tsara tarehy sy ratsy tarehy. Raha sambany tonga eto ianao dia tongasoa.
Eto, ao Cazoo, dia fariparitanay ireo tetikasa mahaliana indrindra amin'ny tontolon'ny cryptonika goavambe, manadihady ny vidiny sy ny endri-javatra, mahita ny fototry ny varotra ary manao fanadihadiana teknika mandroso amin'ny blockchains. Raha fintinina, misy zavatra ho an'ny tsirony rehetra.
Cazoo dia boky, diary, Moleskine naoty izay mamela ahy hitadidy ny fikarohana nataoko. Nataoko tamin'ny Internet izany, ampahibemaso, satria izay nianarako dia vao fantatro tao amin'ny tranonkala, ary amin'ny tranonkala dia averiko amin'ny fanantenana fa azonao ampiasaina koa izy io. Raha izany dia faly aho amin'izany.
Andao jerena izay Ethereum 2.0 ary fantaro ny pitsopitsony mahaliana rehetra.
Efa te hividy Ethereum ve ianao? Raha manao izany amin'ny Binance ianao dia ampiasao ity rohy referral ity: manana fihenam-bidy avo indrindra azonao, 20%, amin'ny kaomisiona rehetra, MANDRAKIZAY!
Ny famaritana fohy momba ny Ethereum 2.0
Ny olan'ny Ethereum, izay te hamaha ny Ethereum 2.0
Inona no hiova amin'ny Ethereum 2.0?
Dingana 0: Porofon'ny rojo ny tsatòka sy ny fanilo
Dingana 1: famonoana
Dingana 2: fitambarana
Dingana 3: EWASM
Ny fiatraikany amin'ny vidin'ny ETH miaraka amin'ny fanavaozana Ethereum 2.0
Ny Ethereum 2.0 Serenity, araka ny nofaritan'i Preston Van Loon, dia blockchain hafa noho ny Ethereum ankehitriny araka ny ahalalantsika azy. Ho azy manokana dia fanavaozana Ethereum, na izany aza tsy mila siny mafy ny rojo tany am-boalohany.
Preston Van Loon - Prysmatic Labs mpiara-manorina, Ethereum Protocol Develope
Ahoana no hahafahanao miditra amin'ny Ethereum 2.0? Hatao petra-bola vola aloa tambabe an'i Etera manomboka amin'ny taloha ka hatrany amin'ny rojo vaovao amin'ny alàlan'ny Smart Contract. Fifanakalozana tokana io, aorian'izay dia tokony hatsahatra ny fampiasana ny rafitra Ethereum lova.
Araka ny nolazaiko tany am-piandohana, ny Ethereum dia efa nandalo fanavaozam-baovao vitsivitsy izay nahatonga azy io ho tsy dia be loatra ary azo ovaina kokoa, amin'ny fiandrasana ny famoahana ny Ethereum 2.0. Ireo fanovana ireo dia manana anarana mahatalanjona: Homestead martsa 2016, Metropolis Byzantium Oktobra 2017, Metropolis Constantinople Febroary 2019, ary Istanbul Desambra 2019.
Hainay ny antony ao ambadiky ny fanovana: ny famolavolana ankehitriny dia misy fetrany be loatra. Ny algorithm Porofon'ny asa ary ny faritra hafa amin'ny maritrano dia tsy nahazaka ny fangatahan'ny mpamorona.
Ny sasany amin'ireo olana lehibe dia:
Scalability: zava-misy fantatra fa ny solosaina manerantany (ny tena ifantohan'ny Buterin sy ny famoronana Ethereum) miadana. Amin'izao fotoana izao, tototry ny fisoratana anarana tsy miankina (DAPPS) sy ny Smart Contract mihodina ao aminy io protokol io. Nisy fanatsarana vitsivitsy namboarina teo amin'io lafiny io, saingy nanjary mazava fa ny porofon'ny Proof of Work dia tsy mahazaka ny fangatahana.
fiarovanaTsy mbola nisy ny fanitsakitsahana fiarovana lehibe any Ethereum, fa ny fanatsarana sasany dia fantatra fa mahasoa ny fahasalaman'ny rafitra iray manontolo. Tanjona ho an'ny Ethereum 2.0, izay mikendry ny hamorona sehatra matanjaka kokoa.
Masinina virtoaly vaovao: iray amin'ireo fanavaozana lehibe an'ny Ethereum ny famoahana milina virtoaly. Ity no ampahany mihazakazaka ny fifanarahana hendry ary manao ny protokolina solosaina manerantany. Ny olana dia miadana be koa ity ampahany ity. Olana lehibe io satria ny fifanakalozana rehetra ao amin'ny Ethereum dia manavao ny satan'ny tambajotra manerantany. Amin'izao fotoana izao, ny EVM (Ethereum Virtual Machine) dia tavoahangy iray ao amin'ny rafitra.
Vantany vao voafaritra ny olan'ny Ethereum 1.0 dia afaka mijery izay fanatsarana hoentin'ny Ethereum 2.0 isika. Aza adino fa ireo fanatsarana ireo dia eo amin'ny dingana mandroso indrindra amin'ny drafitra, ny tena fampandrosoana, na dia efa nanomboka aza, mbola ho avy.
Porofon'ny tsatòka: Algorobia marimaritra iraisana porofo-of-Stake no fiovana lehibe indrindra natrehin'ny Ethereum 2.0. Mampiasa ity mekanisma ity tsatokazo fa tsy herinaratra ho refy hanamarinana.
Ao amin'ny porofon'ny porofon'ny Asa, ny rojo miaraka amin'nyhery hash ny ambony no tsara kokoa.
Ao amin'ny porofon'ny porofon'ny Stake, ny rojo miaraka amin'ny loharanon-karena be indrindra amin'ny tsatokazo io no tsara indrindra.
Ankoatr'izay, ny mpanamarina dia lasa loharano vaovao ary koa manaparitaka ireo mpanaparitaka. Ireo dia mpampiasa izay namatotra farafaharatsiny 32 ETH. Ireo fitehirizana loharanom-pahalalana ireo dia mamela ny validator hiditra amin'ny loteria hofidina ho mpamorona ny sakana manaraka ary hahafahany mitaky ny valisoany. Raha mandeha any ivelan'ny toerana ny mpamaritra iray na manao zavatra tsy marina izy io raha ampahany mavitrika amin'ny tamba-jotra izy io, ny sasany na ny Etera rehetra lasa mpanan-kery dia hoesorina aminy.
ShardingNy fiovana lehibe iray hafa amin'ny rafitra dia ny fampiasana rojom-pitaovana fantatra amin'ny anarana hoe shard. Talohan'izay dia nilaza aho fa ny faharetan'ny fifanakalozana, ny fitohanan'ny tambajotra, dia iray amin'ireo olana goavana amin'ny rafitra ankehitriny. Ao amin'ny maritrano misy azy dia toa tsy misy vahaolana maharitra. Noho io antony io, ny famoronana rojo kely kokoa (shards) izay afaka miatrika ny varotra tsirairay dia hevitra mahafinaritra sy fanatsarana lehibe. Polkadot dia nanao izany hatramin'ny nahaterahany.
Inona ny Ethereum 2.0 RoadMap
Toy ny Ethereum 1.0, Ethereum 2.0 dia havoaka amin'ny dingana efatra ihany koa:
Dingana 0: fanombohana ny rafitra porofo-of-stake vaovao (fantatra amin'ny anarana hoe Casper) sy ny fampandrosoana ny foibe Ethereum 2.0 afovoany (antsoina hoe Beacon Chain);
Dingana 1: ampitomboy ny fahaizan'ny Ethereum 2.0 amin'ny fizarana ny tambajotra ho 64 blockchains (fantatra amin'ny hoe shard chain) izay hahafahan'ny tambajotra handamina fifanakalozana bebe kokoa;
Dingana 2: Alefaso ny fahafahan'ny fifanarahana marani-tsaina mamela ny dApps hihazakazaka amin'ny Ethereum 2.0, ary mamorona tetezana eo anelanelan'ny tambajotra Ethereum voalohany sy Ethereum 2.0; ary farany
Dingana 3: Raha ny filazan'ny mpanorina an'i Ethereum Vitalik Buterin, ity dingana ity dia ny "hanao zavatra hafa tianay ampiana raha vao manomboka isika", fa hampiantrano ny fanovana ny EVM (Ethereum Virtual Machine).
Mbola kasaina havoaka amin'ny taona 2020, ny Beacon Chain dia tambajotram-porofon'ny Stake kasaina hiasa miaraka amin'ny Ethereum 1.0. Halefa fotsiny izy io raha toa ka 524.288 ao amin'ny Ether no notsongaina, ary farafahakeliny 16.384 XNUMX node no voasoratra ho mpanan-kery. Tamin'ny voalohany, ny Beacon Chain dia tsy ho fiovana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Tsy hampiantrano an'i Dapps ity tambajotra ity ary tsy hanao fifanarahana marani-tsaina. Ny asany voalohany dia hitovy fisoratana anarana ho an'ireo mpanamarina ary ny anjarany ao anatin'ny tambajotra.
Ity dingana ity dia voalahatra mandritra ny herintaona aorian'ny famaranana ny dingana 0. Amin'ity dingana ity, ny Ethereum 1.0 Chain tokana dia hokapaina ho kely kokoa antsoina hoe shards. Ny isan'ireo sarda andrasana dia 64 amin'ny fanombohana voalohany. Ity dingana ity dia marefo tokoa: hamela hitantana fifanakalozana amin'ny zana-tsokajy manokana ary hamela fanodinana data mitovy.
Amin'ity dingana ity ny rafitra Porofon'ny asa taloha dia tokony hampidirina ao anaty tambajotra vaovao ho iray amin'ireo zaridaina, iray amin'ireo rojom-bolo. Vokatr'izany, amin'ity dingana ity amin'ny fotoana rehetra dia tsy ilaina ny mamindra firaketana avy amin'ny rojo iray mankany amin'ny iray hafa. Ny tantaran'ny fifanakalozana ny rojo PoW dia hiaina ao anatin'ny Ethereum 2.0. Tokony hitranga izany fotoana fohy aorian'ny fahavitan'ny dingana 1.
Amin'ity dingana ity, fotoana fohy aorian'ny fitambaran'ny rojo Ethereum 1.0 sy Ethereum 2.0 dia soloina ny Masinina Virtual Virtual. Tsy dia misy antsipiriany momba io dingana io, fa ny milina virtoaly vaovao kosa dia hantsoina hoe Ethereum WebAss Assembly (EWASM), satria izy io dia hiorina amin'ny endrika fivorian'ny tranonkala.
Miaraka amin'ity fanavaozana ity, ny fampiantranoana Dapp sy ny fanatanterahana fifanarahana marani-tsaina dia hiasa ao amin'ny Ethereum 2.0. Midika izany fa ho afaka hitsara ny fanavaozana vita isika raha tsy efa nahavita ity dingana ity i Ethereum.
Lava sy miolakolaka ny arabe, saingy ny fahaizan'ny Ethereum 2.0 vaovao dia nahatonga ny vavan'ny olona ho be rano. Hiova izao tontolo izao. Ity dia fanavaozana lehibe izay tsy hitondra soa ho an'ny mpampiasa Ethereum fotsiny, fa handroso ihany koa ny indostria amin'ny ho avy.
Betsaka ny mino fa ny Ethereum dia manana fahaizana manatratra sy mihoatra an'i Bitcoin. Heveriko koa izany. Midika izany fa fampiakarana avo 20 heny ...
Mividy ETHEREUM AMIN'NY BINANCE, MIARAHA DISO 20% amin'ny komisiona
Te hahafantatra bebe kokoa ianao ny fomba fiasan'ny fihenam-bidy?
Azonao vakiana eto ihany koa ny fomba araraoty tsara ny fihenam-bidy amin'ny Binance.
Lahatsoratra talohaInona ny Ethereum?